Standard sy Policies - Ningbo Sunsoul
Standard sy Policies
Fahaizan'ny foana Strong niandohan'ny avy amin'ny fototry anaty mahery.
Sunsoul tompon'andraikitra voalohany sy mahomby toromarika orinasa no fototry ny fitomboana haingana ny orinasa. Ny mafy-miasa sy ezaka ny mpiasa ao amin'ny Sunsoul nandritra ny taona maro dia azo fintinina ho dimy orinasa fitsipika voalaza eto ambany, izay efa nanampy mba hampiroborobo ny orinasa ny fitomboan'ny eo amin'ny lafiny maro toy ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny soatoavina, fiaraha-miasa soa, mpiasa fivoarana sy ny orinasa andraikitra.
• Hampitomboina Customer mifaninana
Mpanjifa no fanalahidin'ny ny fahombiazana. Izahay mizara ny zavatra niainany amin 'ny mpanjifa sy ny vahaolana feno ho an'ny manome azy ireo hahatratra ny tanjony mahomby sy amin'ny fomba mahomby.
• Fanavaozana Mitarika ho Future
Innovation no ràny. Pahombiazana isika mivily ho nofy teknolojia sy ny vokatra. Ny fanapahana sisin'ny dia famoronana sy traikefa.
• Hampitomboina Company Value
Hiteraka mahasoa isika mba hahazoana antoka maharitra fitomboana fahombiazana amin'ny leveraging voalanjalanja ny raharaham-barotra ny portfolio. Miezaka ho lavorary sy hanaraka tsara indrindra.
• Tadidio ny nofin'i mpiasa
Miavaka mpiasa no fototry ny fahombiazana ny orinasa. Ny orinasa kolontsaina dia miavaka amin'ny fahavononantsika, ny mangarahara sy ny fifanajana. Amporisihana ny mpiasa mba handray tompony, ary hiara-maniry izy ny orinasa.
• Ekeo Social Responsibility
Isika anjara amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy fanandratana ny dingana amin'ny alalan'ny fanatsarana, soso-kevitra sy ny teknolojia vaovao. Manolo-tena isika soatoavina manerantany, ny orinasa tsara olom-pirenena sy ny tontolo iainana ara-pahasalamana. Tsy mivadika mitarika ny fitondran-tenantsika mankany ny mpiasa, mpiara-miasa sy ny mpanana petrabola.
• Zero Tolerance ho an'ny kilema
Ny asa dia henjana mivantana amin'ny fisorohana ny tsy fahombiazan'ny misy eo amin'ny vokatra sy ny dingana. Mandinika Zero kilema ho toy ny tanjona. Manohana ny paika fanatsarana ny vokatra sy ny dingana.
Ny fiaraha-mientana no mpanjifa mifantoka ary manolo-tena mba hampitombo ny fiaraha-miasa mahomby hatrany am-piandohana, tsy mampihatra tetikasa mahomby sy ny fanodinana ny fitantanana ny famatsiana boky, manerana ny lifecycle rehetra.
Ny toro lalana ao amin'ny raharaham-barotra dia ny hanatsarana hatrany ny fifaninanana. Ny fananana in-lalina antony faka-famakafakana rehefa mampihatra PDCA sy enim-Sigma fitaovana tsara, haingana sy mitohy fanatsarana ny vokatra sy ny dingana, fomba fanao tsara indrindra mizara ary koa ny fanavaozana no fanorenan'ny kalitao sy ny fitomboan'ny vokatra.
• fandraisana Fanahy, Empowerment & Ny fandraisana anjaran'ireo
• Amporisihana ny fandraisana fanahy, fanomezana hery sy ny fandraisana anjara ny mpiasa amin'ny alalan'ny hatrany sy amin'ny fomba mivoatra ary mampiasa ny fahalalana, traikefa sy ny fahaiza-manao.
• ny tontolo iainana, ny asa Fahasalamana sy Safety Policy
• Isika no tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana ny namana fampanantenana, fanarahana lalàna sy ny fepetra hafa, ary koa ny mamorona toeram-piasana azo antoka sy ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa rehetra, amin'ny fotoana rehetra.
• Mitaiza mpiasa fanentanana amin'ny fiarovana sy ny fahasalamana, dia mampirisika ny mpiasa mba handray anjara asa mifandraika amin'ny fiarovana sy ny fahasalamana ny fianarana.
• Tsy azo atao ny tontolo iainana hanombana fiantraikany tamin'ny fiandohan'ny dingana ny vokatra sy ny dingana fampandrosoana. Izany no tanjona mba hisorohana na manamaivana ny fandotoana.
• Isika koa dia hanamaivana ny nisy solika sy ny fanatanterahana ny fandotoana eo amin'ny orinasa mpamokatra entana dingana, amin'ny alalan'ny fanatsarana mitohy fa mpiara-miasa rehetra tafiditra ao.
• Mba hiantoka azo antoka, salama tsara sy azo antoka miasa tontolo iainana dia ampahany amin'ny andraikitra ara-tsosialy.